Samsung Galaxy Fold: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Fold Galaxy: Samsung taleefanka gacanta ee isku laaban ayaa hadda rasmi ah
Maalintii baa timid. Bilooyin badan oo xan iyo xogo badan kadib, Samsung ayaa soo saartay Galaxy Fold, casriga casriga ah ee isku laaban, si rasmi ah. Nofeembar ee la soo dhaafay yimid bandhiggii ugu horreeyay ee qalabka, kaas oo aad si kooban ugu arki karto qaar ka mid ah nashqadda. Kadib bishii Janaayo waxaan helnay xog cusub oo ku saabsan aaladda at CES 2019. Ugu dambeyn maanta ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay.
Telefoonkan ayaa cinwaano ka dhigay dhamaan bilahaan. Xitaa shalay waxaan helnay macluumaad cusub oo ku saabsan, sida magacaaga. Laakiin Samsung Galaxy Fold ayaa ugu dambeyntii rasmi ah. Taleefan casri ah oo loogu yeero inuu ku beddelo suuqa qaabkiisa iyo tilmaamtiisa. Maxaan ka filan karnaa?
Samsung ayaa soo jeedisay dib u soo ceshatay booskeedii mid ka mid ah shirkadaha ugu hal abuurka badan suuqa. Sababtaas awgeed, sumaddu waxay rabtaa inay ugu dabaaldegto sannad-guurada tobnaad ee Galaxy-kii ugu horreeyay qalabkan. Haddii Apple ay soo saartay iPhone X maalinteeda, Kuuriyaanka ayaa nooga tagaya Galaxy Fold. Qalab ay ku doonayaan inay ku qabsadaan suuqa.
1 Caddaymaha Samsung Galaxy Fold
2 Samsung Galaxy Fold: nooca casriga ah ee casriga ah
Caddaymaha Samsung Galaxy Fold
Qalabkani waa isku-dar ah qaabeyn iyo qeexitaanno. Kaliya kuma salaysna inay ahaato qaab isku laaban oo leh nashqad cusub oo suuqa ku jirta, laakiin waxaan sidoo kale ka helnaa tilmaamaha dhererka qalabka. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee Samsung Galaxy Fold:
Faahfaahin farsamo Samsung Galaxy Fold
Tusaale Galaxy Fold
Nidaamka hawlgalka Android 9 Pie oo leh hal UI
Screen 4.6-inji HD + Super AMOLED (21: 9) bandhig gudaha ah iyo 7.3-inch QXGA + Dynamic AMOLED (4.2: 3) Infinity Flex bandhigay
Gacaliye Exynos 9820 / Snapdragon 855
Kaydinta gudaha 512 GB UFS 3.0
Kaamirada gadaal 16 MP f / 2.2 xagal aad u ballaadhan 12 MP Dual Pixel wide-angle oo leh furfurnaan f / 1.5-f / 2.4 iyo xasiliyaha muuqaalka muuqaalka + lens 12 telephoto lens oo leh laba-weyneyn muuqaal iyo muuqaal f / 2.2
Kaamirada hore 10 Xildhibaan f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 dareeraha qoto dheer iyo 10 MP f / 2.2 daboolka.
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS Wi-Fi 802.11 ac USB-C 3.1
Tilmaamo kale Faaraha akhristaha fahanka 'gyroscope NFC'
Batariga 4.380 Mah
Peso Gram 200
Qiimaha 1980 Dollar
Qaabkan ayaa caqabad ku noqday Samsung. Shirkaddu waxay sheegtay in agabyo cusub iyo habab wax soo saar la soo saaray si ay ugu suurta gasho moodeelkan inuu suuqa gaadho. Tusaale ahaan, qaabka loo qaloocdo waa muhiim. Tan iyo markii qaabkani isku laaban yahay gudaha. Marka markaad foorarsato, cidhifyada shaashadda ayaa isu soo dhowaanaya.
Marka la laabo, waxaan helnaa shaashad weyn oo 7,3-inji ah qalabka. Halka shirkaddu soo bandhigtay shaashad labaad oo 4,6-inji ah. Taas oo u oggolaan doonta adeegsigan badan ee taleefanka iyadoo ku xiran xaaladda. Labada shaashadoodba waxay la yimaadaan xal aad u wanaagsan. Gaar ahaan tan weyn, oo loogu talagalay in lagu cuno waxyaabaha mar walba jira.
Samsung Galaxy Fold: nooca casriga ah ee casriga ah
Fikradda ah Fold Galaxy waa in la helo qalab ku habboon xaalad kasta. Markii laalaabo, waxaa lagu hayaa calaacasha gacanta. Halka markii la furo, aad u daawan karto fiidiyowyada sida ugu fiican. Samsung waxay ku qeexday inay tahay a taleefannada casriga ah, kiniin iyo kamarad hal aalad ah. Sharaxaad wanaagsan oo qalabkan ah.
Hawlo badan ayaa lagama maarmaan u ah qalabkan. Sidaa darteed, Samsung ayaa kuu oggolaan doonta inaad haysato saddex codsi oo isku furan isla waqtigaas marka loo isticmaalo qaabka kiniinka. Sidaas waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyada oo aad barnaamijyo ku haysataa qalabka isla waqtigaas. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu furto barnaamijyada ugu muhiimsan waqti kasta. Samsung waxay la shaqaysay shirkado sida Google iyo Microsoft howshan, si ay u suurta gasho. Barnaamijyada waxaa loo qaybiyaa dusha shaashadda, qaab ay dhammaan u wada furan karaan, laakiin u isticmaal si caadi ah isla waqtigaas. Intaas waxaa sii dheer, waa suurtagal in si fudud loo beddelo cabbirka shaashadahaan.
Lix kaamiro ayaa ah waxa aan ka helno aaladda. Saddex kamaradood oo xagga dambe ah, laba gudaha ah iyo mid xagga hore ah. Marka waxaad haysataa kamaradaha xagal kasta oo leh dhamaadka sare ee laga soo qaatay astaanta Kuuriya. Waxaan dhab ahaan arki karnaa sida sawirku ugu kasbaday xiriirkan shirkaddan. Isku-dhaf xoog leh, oo aan ka heli karno sida ugu wanaagsan dhammaadka-dhamaadka dhammaan noocyada xaaladaha.
Batarigu wuxuu ahaa arrin shaki gelisay. Sidee ayaad batari ugu heli kartaa casriga casriga ah ee isku laaban? Samsung ayaa si fudud ugu xallinaysa Fold Galaxy-ka. Waxay sharad ku galeen laba baytariyada. Marka waxaan leenahay ismaamul ku filan taleefanka markasta, marka lagu daro hal-abuurnimada weyn ee Samsung. Adoo haysta laba baytar oo ka shaqeyn doona isla talefanka casriga ah. Xaaladdan oo kale waxaan awood u leenahay 4.380 Mah. Waxba lagama soo hadal qaadin imika oo ku saabsan joogitaanka amarka degdegga ah ee qalabka.
Intaa waxaa dheer ogaanshaha wax walba oo ku saabsan taleefankan casriga ah, Samsung waxay sidoo kale nooga haysaa macluumaad ku saabsan taariikhda ay suuqa soo bandhigeyso, marka lagu daro qiimeheeda Inbadan ayaa lagu xamanayay qiimaha uu yeelan lahaa Galaxy Fold. Laakiin ugu dambeyntii waxaan horeyba u haynaa dhammaan xogta ku saabsan. In kasta oo horaan u ogaanay in qaabkani aanu noqon doonin mid si sax ah u jaban xagga qiimaha. Telefoonku miyuu ka badan yahay qiimaha aan maskaxda ku hayno?
Qiimaheeda waxaa sii dheer, faahfaahin kale oo na xiiseyneysa waa taariikhda soo bandhigida qalabka. Dhinac kale oo ku saabsan kaas oo ay jireen xan badan ayaa bilooyinkan. Nasiib wanaag, waxaan horey u helnay jawaabaha xantaas. Suuqgeedu wuxuu bilaabmayaa laga bilaabo Abriil 26. Marka waa inaan sugnaa dhowr bilood illaa laga iibsan karo dukaamada.
Wuxuu bilaabmaa wadar ahaan afar midab: Buluug, dahab, qalin iyo madow. Intaa waxaa dheer, iyada oo ku xiran midabka, waxaa suurtagal ah in la habeeyo aagga uu qalabka ku foorarsan yahay. Marka isticmaale kasta wuxuu awood u yeelan doonaa inuu go'aamiyo muuqaalka Galaxy Fold. Sida qiimaha, waxaa laga bilaabay $ 1.980 qiima ahaan ilaa dukaamada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Fold Galaxy: Samsung taleefanka gacanta ee isku laaban ayaa hadda rasmi ah
Samsung waxay soo bandhigaysaa Galaxy Watch Active iyo Galaxy Fit